समीक्षा:2जीआईजी टेक्नोलॉजीज! नियन्त्रण सुरक्षा प्रणाली
2 जीआईजी टेक्नोलॉजीज! नियन्त्रण वायरलेस गृह सुरक्षा प्रणाली
यो केवल गृह सुरक्षा प्रणालीको आइफोन हुन सक्छ
तपाईंले शायद 2GIG टेक्नोलोजी भनिने कम्पनीको बारेमा कहिल्यै सुनेको छैन, तर तिनीहरू साँच्चै नेटवर्क-पहुँच गृह सुरक्षा प्रणाली क्षेत्रमा आफैले नाम बनाउन शुरू गर्दै छन्। 2GIG ले मलाई सुरक्षा सुरक्षा प्रणालीको आईफोनको बारेमा के सोचेको छ। जानुहोस्! नियन्त्रण प्यानलको सबैभन्दा सहज, फीचर-प्याड गरिएको, राम्रो डिजाइन गरिएको गृह सुरक्षा प्रणालीहरूमध्ये एउटा हो जुन मैले सँधै काम गरेको छु।
एक ब्रेक-पछि हामीले गत वर्षमा, म एक सुरक्षा प्रणालीको लागी थियो जुन मैले आफैं स्थापना गर्न सक्दिन। मैले पहिले "पुरानो विद्यालय" प्रणाली पाएको थिएँ र एकाइ वा सेवा प्रदायकसँग प्रभावित थिएन। यस पटक मैले सोधेँ कि म आफैलाई एक DiY प्राप्त र एक स्थापना गर्नेछु।
म हाल बजारमा धेरै प्रणालीहरू देखे तर तिनीहरू धेरै DiY-friendly लगिन सकेन, मुख्य इकाई माथि र सेन्सर दर्ता गर्नको लागि धेरै पुरातन कोडहरू प्रविष्ट गर्न स्थापनाकर्तालाई आवश्यक पर्दछ। म मेरो खोजमा निराश भएको थिएँ जबसम्म मैले 2GIG गोँलो ठिक्यो! वायरलेस सुरक्षा प्रणाली नियन्त्रण गर्नुहोस्। यसले तुरुन्त मेरो आँखा पकड्यो किनकी यसको एक मानक संख्यात्मक कीप्याड छैन, तर सट्टामा उज्ज्वल एलसीडी टचस्क्रीन थियो।
मैले2जीआईजी वेबसाइट भ्रमण गरेको प्रणालीको बारेमा बढी सिक्न र यसको सुविधाहरूको समीक्षा गर्न। यो चीज लोड भएको थियो: जानुहोस्! नियन्त्रण प्रणाली प्रदर्शित गरिएको छ:
ताररहित सेन्सर (कुनै चलिरहेको केबलहरू छैनन्)
सेल सेवा र / वा ल्यान्ड लाइन मार्फत अलार्म सेवा (खराब केटाहरूले तपाइँको सेल जडानलाई काट्न सक्दैन)
Z-wave थर्मोस्टेट्स, लाइट स्विचहरू, र ढोका तालाहरूको गृह स्वचालन नियन्त्रण (यदि तपाइँ यी विकल्पहरू छनौट गर्नुहुन्छ र अलार्म सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित शुल्क भुक्तानी गर्नुहुन्छ)
आईफोन / एन्ड्रोइड / ब्ल्याकबेरी / सुरक्षित वेब साइट (सशुल्क इंटरैक्टिव सेवा योजनाको साथ) को माध्यम ले आर्मिङ, बेवास्ता, र सेन्सर सूचना
एन्मिमिङ र वायरलेस डिफोब मार्फत बेवास्ता गर्दै (तपाइँ रिमोटको साथ कार कसरी अनलक गर्नुहुन्छ)
धुआँ / आगो / बाढीको अलार्म रिले क्षमता (वैकल्पिक सेन्सरको खरिदको साथ)
अलार्म सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नको लागि निर्मित स्पेसफोन (वैकल्पिक सेवा)
सबै कुरा ठूलो महसुस भयो, म चिन्ता भएको एक मात्र चीज थियो कि यो कति लागत खर्च हुने थियो। मेरो आश्चर्यको लागी, मैले यो घर सुरक्षा स्टोरमा $ 460 को लागि फेला पारे। यो साइटले-यो-वेयरर्स गर्ने गर्दछ जुन पेशेवर-ग्रेड अलार्म प्रणाली चाहन्छन् तर पागल उच्च स्थापना मूल्यहरू तिर्न चाहँदैनन् वा बहु-वर्ष सेवा सम्झौताहरूमा लक गर्न चाहँदैनन्।
आधारभूत किट3ताररहित ढोका / सञ्झ्याल सम्पर्क सेन्सरहरू, एक गति सेन्सर, प्रणालीलाई असक्षम र असक्षम गर्ने कुञ्जीफोब, मुख्य नियन्त्रण प्यानलमा, एक शक्ति एडाप्टर र ब्याट्री र नियन्त्रण कक्षमा स्थापना गर्ने सेलुलर कार्डको साथ हुन्छ। तपाईले कुन सेल-प्रदायक छनौट गर्नुपर्दछ जुन तपाईले कुन प्रकारको सेल रेडियो स्थापना गरेको इकाई खरिद गर्नुहुन्छ जब मनपर्छ। म तपाईलाई थाहा छ प्रदायक छनौट गर्न सिफारिस गर्दछु तपाईंको घरमा सर्वश्रेष्ठ संकेत स्वागत छ। तपाईंको अलार्म सेल सेवा लागत तपाईंको प्रदायक प्रदायक र सेवा प्याकेजले तपाईले रोज्नु भएको मासिक अलार्म सेवा शुल्कमा बनाइयो।
2 जीआईजी (र धेरै अन्य अलार्म प्रणालीहरू) द्वारा उपलब्ध दस्तावेजहरू पेशेवर स्थापनाकर्ताहरूको पक्षमा छन्, तर म अझै पनि सबै चीजहरू बुझ्न सक्दिन जुन चीज चलिरहेको थियो। मलाई मात्र थियो कि प्रणालीमा प्रयोगकर्ता पुस्तिका समावेश गरिएको थिएन र केवल एक स्थापना गाइड थियो, यो उनीहरूको वेबसाइट भ्रमण गरी प्रयोगकर्ता गाइड डाउनलोड गरेर सम्झौता गरिएको थियो।
एक अन्य समस्या थियो कि प्रणाली संग कुनै पावर केबल शामिल छैन। फेरि, मलाई अनुमान लाग्छ कि पेशेवर स्थापनाकर्ताहरूसँग केबलको स्पूल हुनेछ कि तिनीहरूले आवश्यक लम्बाई काट्न सक्नेछन्। यो अझै राम्रो हुनेछ यदि तिनीहरू केबलको 10 फिट लम्बाइ समावेश गर्थे ताकि तिनीहरूले मलाई मेरो स्थानीय रेडियो श्याकमा यात्रा गर्न सक्दछन्।
स्थापना आफैँ केहि घण्टा लागे, र उचित सीधा थियो। वायरलेस सेन्सर दर्ता गर्नु निकै सजिलो थियो।
मैले सेवा प्रदायक छनौट गरे केही दिनको लागि पर्खें। मैले सुरक्षा सेवाको लागि रोजेका थिए जुन गृह सुरक्षा स्टोरको वेबसाइटमा विज्ञापित गरिएको थियो जो अलार्म.com द्वारा संचालित अलार्म रिले सेवा थियो। मैले उन्नत अन्तरक्रियात्मक सेवाको लागि रोजेका छन जुन मेरो आईफोनको माध्यमबाट रिमोट आम्मिङ / हानिकारकलाई अनुमति दिईयो र केहि उन्नत अधिसूचना सुविधाहरू प्रदान गरेको छ जसले मलाई पाठ / ई-मेल / सूचनाहरू धक्का गर्न अनुमति दिन्छ जब अलार्म ट्र्याक गरिएको छ वा जब केहि सेन्सरहरू छनौट गर्दा मलाई अनुमति दिन्छ। ट्रिगर गरिएको छ। उदाहरणका लागि हरेक समय हाम्रो ड्राइभ गेट खोलिएको छ मेरो नियमित कामको घण्टामा मैले पाठ लेखेको छु कि यो खुला थियो। यसले अलार्म बन्द गर्दैन वा पुलिसलाई कल गर्दैन (यद्यपि मैले यो गर्न सक्दछ)। यो मलाई केवल सूचित गर्दछ कि कसैले मेरो ढोका संग भइरहेको छ।
अलार्म सेवा जो अलार्म.com द्वारा संचालित छ मेरो मेरो DiY वायरलेस सुरक्षा क्यामेरा प्रणाली (शुल्कको लागि) मलाई अलार्म सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको भिडियो हेर्न अनुमति दिन्छ (यदि म अतिरिक्त लागत तिर्न चाहानुहुन्छ)।
टचस्क्रिन अनुभव अन्य सुरक्षा प्रणाली प्रदायकहरूले प्रस्तावित पुरानो विद्यालय कीस्पप भन्दा धेरै सहज छ। टचस्क्रिनको अतिरिक्त, प्रणालीले टच स्क्रिनको साथमा फ्याक्च गर्न पक्का गरेको घटनामा एक ठूलो आगो / आपतकालीन बटन पनि समावेश गर्दछ। यसले एउटा गृह बटन पनि समावेश गर्दछ जुन तपाइँले आईफोनमा गृह बटन जस्तै मुख्य मेनुमा फिर्ता लिन्छ।
प्रणालीले लगभग हरेक घटनाको लागि भ्वाइस प्रतिक्रियाहरू जस्तै दरवाजा खोल्दछ। तपाईले निर्मित कस्टम बैंकमा शब्दहरू सँगै string string गरेर आफ्नै आफ्नै अनुकूल प्रतिक्रियाहरूको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मेरो पछाडि ढोका र एक पछाडि यार्ड ढोका छ र मैले तिनीहरूलाई नामकरण गर्न सक्षम भएको कारण सबै आवाजहरू निर्मित-भ्वाइस भ्वाइसबाट उपलब्ध थिए। भ्वाईस बैंक केहि हदसम्म सीमित छ किनकि मैले "गेट" शब्द फेला पार्न सकेन र यसको स्थानमा अर्को शब्दको विकल्प थियो।
यस प्रणालीको साथमा मेरो कुनै पनि समस्याहरूसँग कुनै समस्या छैन र केहि उन्नत सुविधाहरू जस्तै जे-लेभ प्रकाश, थर्मोस्टेट, र ढोका नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाउन उत्सुक हुँ।
प्रणाली अत्यधिक विस्तार योग्य छ। तपाईं सजिलै सेन्सर सेन्सर गरेर र नामांकन प्रक्रिया पछ्याएर धुम्रपान / आगो र ग्लास ब्रेक सेन्सर जस्ता अन्य सेन्सरहरू सजिलै थप्न सक्नुहुनेछ। मैले दोस्रो सेफफ्याक थपेँ र एक जोडीको थप ढोकाहरू थपे।
यदि तपाइँ आफ्नो घर वा व्यवसायको लागि आफ्नो परिमिति सुरक्षा बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँले 2GIG गोमा निश्चित रूपमा हेर्नु पर्छ! वायरलेस गृह सुरक्षा प्रणाली नियन्त्रण गर्नुहोस्।
क्याक्स इमेलहरू के हुन्?
फेसबुकमा खोजीमा तपाईलाई भेट्टाउन अजनबीहरूलाई ब्लक गर्नुहोस्
तपाइँ सुरक्षित अनलाइन हुनुहुन्छ भनेर कसरी गोप्य छौं?
तपाइँले यो बिक्री गर्नु अघि तपाईंको आईप्याड मेटाउन कसरी गर्ने?
सञ्जाल सुरक्षा सफ्टवेयर र उपयोगिताहरू
एक प्रभावकारी सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंको सानो व्यवसाय हैकरहरूको लागि एक प्रमुख लक्ष्य हो!
Wikileaks के छ?
अस्पष्टताको माध्यमबाट सुरक्षा
विन्डोज पुनःप्राप्ति विभाजन कसरी हटाउने?
5 आवश्यक Wii होमबrew अनुप्रयोगहरू
फाइल पुन: प्राप्ति सफ्टवेयर अकसर गरे
Acer Aspire V17 नाइट्रो ब्ल्याक संस्करण समीक्षा
कुकी: टमको म्याक सफ्टवेयर पिक
9 इन्टरनेशनल प्रसिद्ध डागहरू तपाईंलाई पछ्याउन आवश्यक छ
SQL Server प्रमाणिकरण मोड चयन गर्दै
विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरू नि: शुल्कका लागि माइक्रोसफ्ट कार्यालय प्राप्त गर्छन्
3D गृह थियेटर र 3D-टिभी आधारभूत प्रश्नहरू परिचय परिचय पृष्ठ
ड्याश क्यामेराहरूको प्रकारहरू
ठूलो स्क्रॉल IV: Oblivion मौसम कोडहरू (पीसी)
एक एक्सेल वर्कशीटमा सीमा पङ्क्ति र स्तम्भहरू
प्रदर्शन - लिनक्स कमाण्ड - युनिक्स कमान
सिस्को VPN क्लाइन्ट सफ्टवेयर उपलब्धता उपलब्धता
व्यक्तिगत कम्प्युटर उपकरण किट
कसरी स्थापना गर्न र गृह थियेटर रिसीभर सेट अप गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार कानून र आरएसएस फीडको अन्य कानुनी पहलुहरू सिक्नुहोस्
कसरी समाधान गर्नुहोस् Libgdk-win32-2.0-0.dll त्रुटिहरू फेला परेन
8 उन्नत Google Keep Tips र Tricks